Relationship Archives » Page6of 60 » Myanmar Family Life
မိန်းကလေးတစ်ယောက်ကို ဖြတ်ချင်လာပြီဆိုရင် ယောကျာ်းတွေ သုံးတတ်တဲ့ အကွက်များ
သမီးရည်းစား Relationship တစ်ခုမှာ ကိုယ့်ချစ်သူက ကိုယ့်ကို စိတ်ကုန် လာပြီလားဆိုတဲ့ စိုးရိမ်စိတ်က မိန်းကလေးတွေမှာ ပိုတွေ့ရတတ်ပါတယ်။စစ်တ မ်းတွေအရဆိုရင် Relationship တွေမှာ မိန်းကလေးတွေဘက်ကနေ အရင် စပြီး လမ်းခွဲတာများပါတယ်။ယောက်ျားအများစုက လမ်း ခွဲရအောင်ဆိုတဲ့ စကား ကို သူတို့ဘက်ကနေ အရင်စပြီး ပါးစပ်ကနေ ဖွင့်မပြောပေမယ့် တစ်ဖက် မိန်း ကလေး သူ့အပေါ် စိတ်ပျက်ပြီး လမ်းခွဲချင်လာအောင် လုပ်ပြ၊နေပြတ တ်ကြ ပါ တယ်။နှုတ်ကနေ၊ပါးစပ်ကနေ ထုတ်မပြောပေမယ့် သူကိုယ့်ကို လမ်းခွဲ ချင်နေ ပြီဆိုတာကို ဘယ်လိုသိနိုင်လဲ..?ချစ်သူကောင်လေးကို လမ်းခွဲချင်လာပြီဆိုရင် ယောက်ျားတွေ (ပါးစပ်ကနေ လမ်းခွဲရအောင်လို့တော့ ဖွင့်မပြောပေမယ့်) လု ပ်ပြတတ်တဲ့ အပြုအမူတွေကို ဖော်ပြပေးချင်ပါတယ်။အဲ့ဒါတွေကတော့…
ဒါကတော့ ပြတဲ့ လက္ခဏာတွေထဲမှာမှ အသိသာဆုံးတွေထဲက တစ်ခုပါ။ဒီလူ ကိုယ့်အပေါ် နွေးထွေးလား(သို့)ဒါမှဟုတ် အေးစက်နေလားဆိုတာ တကယ်ေ တာ့ ကိုယ်ကိုင်တိုင်အသိဆုံးပါ။ဥပမာ- ကိုယ်ကပဲ ပြောနေရပြီး သူ့ဘက်ကေ တာ့ စိတ်မပါလက်မပါနဲ့ဝတ်ကျေတန်းကျေပုံစံမျိုးဖြစ်နေတာ၊ကိုယ့်အပေါ်မှာ အာ ရုံမရှိတာ၊အာရုံမစိုက်တာမျိုးပါ။အေးစက်စိမ်းကားလာတယ်ဆိုတာမျိုးကတော့ စိတ်နဲ့ပဲ ခံစားပြီး သိနိုင်တဲ့ အရာမျိုးပါ။
ဒါမျိုးကလည်း အရမ်းကို သိသာပါတယ်။စတွဲလာတည်းက ကိုယ့်ရဲ့ မကောင်း တဲ့ အကျင့်တွေကိုရော ကောင်းတဲ့အကျင့်တွေကိုပါ အားလုံးကို သိထားလက်ခံ လာခဲ့ပြီး နောက်ပိုင်းကျမှ ထဖောက်လာတာမျိုးပါ။ဟိုဟာလုပ်ရင် လုပ်ပြန်ပြီ။ဒီ ဟာ လုပ်ရင်လုပ်ပြန်ပြီနဲ့ အသေးအဖွဲလေးကအစ လိုက်ပြီး အပြစ်တင်ပြောဆို နေတာမျိုးပါ။
(၃)ဒီလူ့အနားမှာ နေနေကာမှ ပိုအထီးကျန်သလို ခံစားလာရတာ
ကိုယ်ချစ်တဲ့သူ ကိုယ့်ကို ချစ်တဲ့ သူရဲ့ အနားမှာ နေနေရင် တကယ်တော့ ပျော်ရွှင်နေရမှာပါ။ဒါပေမယ့် ကိုယ့်အပေါ် လုံးဝ ဂရုမစိုက် တဲ့ မချစ်တဲ့ သူအနား မှာရှိနေရရင်တော့ ကိုယ့်ရဲ့ စိတ်ခံစားချက်တွေဟာ နာကျင်ရတတ်ပါတယ်။ တစ်ယောက် တည်းနေရထက် သူ့ရဲ့ အနားမှာ နေနေရတာ က သင့်အတွက် ပိုပြီးတော့အထီးကျန် ၀မ်းနည်းမှုတွေကို ခံစားနေရရင်တော့ သေချာပါတယ်။သူ သင့်ကို မချစ်တော့ပဲ လမ်းခွဲချင်နေလို့ပါ။
ဒါကလည်း သိသာတဲ့ sign တစ်ခုပါ။သင်နဲ့တွေ့ဖို့ အရေးကို အရင်လောက် မ တတ်ကြွတော့ပဲ အလုပ်များတယ်ဆိုပြီး အကြောင်းပြ ရှောင်နေတာမျိုးပါ။သူငယ် ချင်းတွေနဲ့ အလုပ်ကပဲ သူ့အတွက် နံပါတ်တစ်ဖြစ်နေပြီး သင့်အတွက်ကတော့ အချိန်မပေးတော့ပဲ အမြဲတမ်းဖယ်ခွာ ရှောင်ကျဉ်စ ပြုလာတာမျိုးပါ။
သင့်ကို ရှောင်ခွာချင်တဲ့သူဖြစ်နေတာကြောင့် သင်နဲ့တွေ့တိုင်း သူ့ရဲ့ မျက်နှာနဲ့ အမူအရာတွေက ဘယ်လိုမှ ရွှင်လန်းနေမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ဒါက သဘာဝပါ။လူ တစ် ယောက်က ကိုယ်မကြိုက်တဲ့ အရာ၊ကိုယ်သဘောမကျတဲ့ အရာကို မြင်နေ တွေ့နေရင် မျက်နှာက ဘယ်လိုမှ ကြည်ကြည်လင်လင်ရှိနိုင်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။ စိတ်ညစ်စရာပြဿနာရယ်လို့ သူ့မှာ ထွေထွေထူးထူးမရှိပဲ သင်နဲ့ တွေ့တိုင်း အမြဲစိတ်ရှုပ်ပြ၊စိတ်တို၊ဒေါသထွက်ပြနေရင်လည်း ဒါသင့်ကို လမ်းခွဲချင်နေတယ် ဆိုတာကို အမူအယာနဲ့ ပြနေတာပါ။
(၆)သူ့မိသားစုအသိုင်းအ၀ိုင်းနဲ့သူငယ်ချင်းတွေကပါ သင့်အပေါ် ပြောင်းလဲ တာ
သူ့မိသားစုအသိုင်းအ၀ိုင်း၊သူနဲ့အရမ်းကို ရင်းနှီးတဲ့ သူငယ်ချင်းမိတ်ဆွေတွေ ရဲ့ ဆက်ဆံ ပုံကို ကြည့်ရင်လည်း ဒီလူကိုယ့်အပေါ် လမ်းခွဲချင်နေပြီလား ဆိုတာကို သိနိုင်ပါတယ်။သင့်အပေါ်မှာထားတဲ့ သူ့ရဲ့ စိတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီး သူနဲ့ အရမ်းကို ရင်းနှီးတဲ့ သူငယ်ချင်းတွေကို ရင်မဖွင့်ပဲ မနေပါဘူး။သေချာပေါက် ရင်ဖွင့်မှာပါ။ ချစ်သူကောင်လေးရဲ့ မိသားစု အသိုင်းအ၀ိုင်းနဲ့ အရင်းနှီးဆုံး သူငယ်ချင်းတွေက သင့်အပေါ် ဆက်ဆံတဲ့ အမူအရာပြောင်းလဲလာပြီဆိုရင်တော့ သင့်ချစ်သူက သင်နဲ့ လမ်းခွဲချင်နေပြီဆိုတာကို ပြနေတာပါ။
ဒီရက်ပိုင်းမှာ သူ့ရဲ့ အမူအယာတွေက ပုံမှန် မဟုတ်ပဲ ခြေရှုပ်လာနေတာမျိုးပါ။ တခြား ကောင်မလေးတွေနဲ့ ဘာဘာညာညာ အသံတွေ ထွက်လာတာမျိုး၊ တခြားကောင်မလေးတွေနဲ့ တွဲနေပြီဆိုတဲ့ သတင်းတွေ သင့်နားကို ရောက်လာ တာ ဒီလိုမျိုး ခြေလှမ်းပျက်တဲ့ အမူအရာတွေ ပြနေပြီဆိုရင်လည်း ဒါဟာ တစ် ဖက်လှည့်နည်းနဲ့ သူသင့်ကို လမ်းခွဲချင်တယ်ဆိုတာကို ပြနေတာပါ။
Gamer ကောင်လေးတွေရဲ့ ချစ်သူဖြစ်ရင် ရရှိနိုင်မယ့် အကျိုးကျေးဇူး ( ၅ ) ခု
ဂိမ်းဆော့တတ်တဲ့ ကောင်လေးတွေနဲ့ ချစ်ရလို့ ငါတို့တော့ စိတ်ညစ်ရပါပြီဆိုတဲ့ ကောင်မလေး တွေရ်ှရင် အတွေးမှားနေကြောင်း ပြောပြပေးပါရစေ…
ခေတ်ပေါ်ဂိမ်းပေါင်းစုံ ခေတ်စားနေတဲ့ ၂၁ရာစုမှာ ယောက်ျားလေးတော်တော်များများက ခေတ်ရေစီးကြောင်းကို မျောပါကြပါတယ်။ ချစ်သူမိန်းကလေးတွေနဲ့ အဓိက ကြုံတွေ့ရတဲ့ပြသာနာကလည်း ဂိမ်းဆော့လွန်းအားကြီးလို့ အချိန်မပေးနိုင်၊ ဂရုမစိုက်နိုင်တွေဖြစ်ပြီး ရန်တွေဖြစ် ပြသာနာတွေ တက်ကြတာပါ။
ဒါဆိုရင် ဂိမ်းဆော့တတ်တဲ့ ကောင်လေးတွေနဲ့ ချစ်ရလို့ ငါတို့တော့ စိတ်ညစ်ရပါပြီဆိုတဲ့ ကောင်မလေး တွေရ်ှရင် အတွေးမှားနေကြောင်း ပြောပြပေးပါရစေ…
ဂိမ်းဆော့တတ်တဲ့ကောင်လေးတွေက များသောအားဖြင့် ချစ်သူအပေါ် သစ္စာရ်ှကြပါတယ်။ သူတို့က ဂိမ်းကလွဲ ပြီး ကျန်တဲ့အရာပေါ် အာရုံမရောက်တတ်တာကြောင့် ဖောက်ပြန်ဖို့ဆိုတာ အဝေးကြီးပါနော်။
ဂိမ်းဆော့ချိန်မှာ ဆော့တဲ့ဂိမ်းပေါ် အာရုံဝင်စားသလို သင်နဲ့ရ်ှနေချိန်မှာလည်း သင့်အပေါ် အာရုံစိုက်မှုရှိပါတယ်။ သင်က သင်နဲ့အတူတူရ်ှနေချိန်မှာ သင့်အပေါ် အာရုံဝင်စားအောင် လုပ်နိုင်စွမ်းရှိဖို့တော့ လိုပါတယ်နော်
Gamer boys တွေဟာ ဂိမ်းထဲမှာတင်မကဘဲ အပြင်ကအချစ်ရေးမှာပါ ရဲရင့်မှုရှိပါတယ်။ ဂိမ်းထဲက ရဲရင့်မှုက အပြင်က အချစ်ရေးမှာပါ ထင်ဟပ်စေမှာပါနော်။
ဂိမ်းတစ်ခုဆော့ဖို့အတွက် Gamer တွေဟာ အချိန် အတိုင်းအတာ တစ်ခုပေးရပါတယ်။ ဒါကြောင့် သူတို့ဟာ စိတ်ရှည်သည်းခံတတ်သူများ ဖြစ်ပါတယ်။ သင်အလှပြင်တာကြာလို့ ငြူစူမဲ့သူက Gamer လေးတွေ မဖြစ်နိုင်ပါဘူးနော်..
၅. Social ကောင်းသူ
ခေတ်ပေါ်ဂိမ်းတွေဟာ နိုင်ငံတစ်ကာနဲ့ချိတ်ဆက်ရသလို team work ဆော့ရတဲ့ ဂိမ်းတွေရှိပါတယ်။ ဒီလိုplayer ကောင်းဖြစ်ဖို့ သူတို့ဟာ ဆိုရှယ်စကေး ကောင်းဖို့လိုပါတယ် ။ သင်က သင့်ကောင်လေးရဲ့ လူမှုဆက်ဆံရေးအတွက် အထူးတလည် စိတ်ပူနေဖို့ မလိုတော့ပါဖူးနော်။
ရေးသားသူ : marry
ဂိမျးဆော့တတျတဲ့ ကောငျလေးတှနေဲ့ ခဈြရလို့ ငါတို့တော့ စိတျညဈရပါပွီဆိုတဲ့ ကောငျမလေး တှရျှေရငျ အတှေးမှားနကွေောငျး ပွောပွပေးပါရစေ…
ခတျေပျေါဂိမျးပေါငျးစုံ ခတျေစားနတေဲ့ ၂၁ရာစုမှာ ယောကျြားလေးတျောတျောမြားမြားက ခတျေရစေီးကွောငျးကို မြောပါကွပါတယျ။ ခဈြသူမိနျးကလေးတှနေဲ့ အဓိက ကွုံတှရေ့တဲ့ပွသာနာကလညျး ဂိမျးဆော့လှနျးအားကွီးလို့ အခြိနျမပေးနိုငျ၊ ဂရုမစိုကျနိုငျတှဖွေဈပွီး ရနျတှဖွေဈ ပွသာနာတှေ တကျကွတာပါ။
ဒါဆိုရငျ ဂိမျးဆော့တတျတဲ့ ကောငျလေးတှနေဲ့ ခဈြရလို့ ငါတို့တော့ စိတျညဈရပါပွီဆိုတဲ့ ကောငျမလေး တှရျှေရငျ အတှေးမှားနကွေောငျး ပွောပွပေးပါရစေ…
ဂိမျးဆော့တတျတဲ့ကောငျလေးတှကေ မြားသောအားဖွငျ့ ခဈြသူအပျေါ သစ်စာရျှကွပါတယျ။ သူတို့က ဂိမျးကလှဲ ပွီး ကနျြတဲ့အရာပျေါ အာရုံမရောကျတတျတာကွောငျ့ ဖောကျပွနျဖို့ဆိုတာ အဝေးကွီးပါနျော။
ဂိမျးဆော့ခြိနျမှာ ဆော့တဲ့ဂိမျးပျေါ အာရုံဝငျစားသလို သငျနဲ့ရျှနခြေိနျမှာလညျး သငျ့အပျေါ အာရုံစိုကျမှုရှိပါတယျ။ သငျက သငျနဲ့အတူတူရျှနခြေိနျမှာ သငျ့အပျေါ အာရုံဝငျစားအောငျ လုပျနိုငျစှမျးရှိဖို့တော့ လိုပါတယျနျော
Gamer boys တှဟော ဂိမျးထဲမှာတငျမကဘဲ အပွငျကအခဈြရေးမှာပါ ရဲရငျ့မှုရှိပါတယျ။ ဂိမျးထဲက ရဲရငျ့မှုက အပွငျက အခဈြရေးမှာပါ ထငျဟပျစမှောပါနျော။
ဂိမျးတဈခုဆော့ဖို့အတှကျ Gamer တှဟော အခြိနျ အတိုငျးအတာ တဈခုပေးရပါတယျ။ ဒါကွောငျ့ သူတို့ဟာ စိတျရှညျသညျးခံတတျသူမြား ဖွဈပါတယျ။ သငျအလှပွငျတာကွာလို့ ငွူစူမဲ့သူက Gamer လေးတှေ မဖွဈနိုငျပါဘူးနျော..
၅. Social ကောငျးသူ
ခတျေပျေါဂိမျးတှဟော နိုငျငံတဈကာနဲ့ခြိတျဆကျရသလို team work ဆော့ရတဲ့ ဂိမျးတှရှေိပါတယျ။ ဒီလိုplayer ကောငျးဖွဈဖို့ သူတို့ဟာ ဆိုရှယျစကေး ကောငျးဖို့လိုပါတယျ ။ သငျက သငျ့ကောငျလေးရဲ့ လူမှုဆကျဆံရေးအတှကျ အထူးတလညျ စိတျပူနဖေို့ မလိုတော့ပါဖူးနျော။
ရေးသားသူ : marry
ဒီလုိုအချက်တွေရှိတဲ့ မိန်းမမျိုးကို လုံးဝ မယူပါနဲ့ ….
ဒီလုိုအချက်တွေရှိတဲ့ မိန်းမမျိုးကို လုံးဝ မယူပါနဲ့ …
ပြဿ နာ တစ်ခုဖြစ်တိုင်း ယောက်ျားလေးတွေကိုပဲ အပြစ်တင်လို့ မရတဲ့ အခြေအနေတွေရှိပါတယ်။ မိန်းမ တွေကြောင့်လည်း အမှားတွေဖြစ်စေပါတယ်
လူတိုင်းအမှားနဲ့ မကင်းတာက သဘာဝမို့ အိမ် ထောင်ပြုဖုိ့ စဉ်းစားတော့မယ်ဆိုရင် ဒီလိုမိန်းမတွေကို ဝေးဝေးကရှောင်ပါ ဘယ်တော့မှ လက်မထပ်ပါနဲ့
– စကားအရမ်းများပြီး သူ့အကြောင်း၊ သူ့ဘဝအကြောင်းတွေ အဆက်မပြတ်ပြောနေတတ်တဲ့ မိန်းမ။ ဘယ်တော့မှ ရပ်လို့ရမှာ မဟုတ်ဘဲ တခြားသူဘာပြောနေလဲဆိုတာ ဂရုမစိုက်တဲ့ မိန်းမမျိုးဖြစ်ပါတယ် …
– အရင်တစ်ယောက်နဲ့ပြတ်တာမကြာသေးဘဲ စိတ်ကူးယဉ်ထားတဲ့ မင်္ဂလာပွဲအကြောင်း၊ ကလေးဘယ်နှစ်ယောက် လိုချင်လဲဆိုတာမျိုးပြောတတ်တဲ့ မိန်းမမျိုး သတိထားပါ
သူက အိမ်ထောင်ပြုဖို့အတွက် အရမ်းဆန္ဒရှိနေတာကြောင့် သင်ကသူ့အတွက် ထူးခြားတဲ့သူတစ်ယောက်ဖြစ်လာမှာ မဟုတ်ပါဘူး …။
-ကိုယ့် အပေါ်ကိုနားလည်ဖြည့်ဆည်းပေးတဲ့မိန်းမနဲ့ ကိုယ့်ဆီက အကောင်းဆုံးတွေကို ရယူချင်တဲ့ မိန်းမမျိုးက ကွာခြားပါတယ်။ အရမ်းကို ဝေဖန်လွန်းတဲ့ အလိုမကျတတ်တဲ့မိန်းမဆိုရင်ရှောင်လိုက်တာ အကောင်းဆုံးပါ
ရုပ်ကလေးက အမှတ်ပြည့်ရပေမယ့် ဦးနှောက် သုညဖြစ်နေတဲ့ မိန်းကလေးကိုလည်း ရှောင်ပါ …။
-ကိုယ့်ကို အသုံးချဖို့ပဲ ဆက်ဆံတတ်တဲ့ မိန်းမတွေရှိပါတယ် ။ သူ့ဘေးမှာ အမြဲရှိစေချင်တယ်လို့ထင်ရပေမဲ့ ကိုယ့်ကိုယ်ပိုင်ဘဝကို ချုပ်ချယ်သလို ဝင်စွက်ဖက်တတ်တာမျိုးတွေ ရှိနိုင်ပါတယ် ။ သူတို့နဲ့ လက်တွဲခဲ့ရင် ကိုယ့်ဘဝပုံစံကိုတောင် ကိုယ့်စိတ်ကြိုက်ဖန်တီးခွင့်ရတော့မှာ မဟုတ်ပါဘူးး
-ကိုယ့်ကို အရမ်းမှီခိုလွန်းတဲ့ မိန်းကလေး ။ သူ့ကိုယ်ပိုင်ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့ ဘာမှ မဆုံးဖြတ်နိုင်တာကြောင့် ဒီလိုမိန်းကလေးနဲ့ လက်တွဲမယ်ဆိုရင် ကိုယ်ရှေ့ဆက်သွားမယ့်လမ်းမှာ ဝန်ထုတ်ဝန်ပိုးတစ်ခုဖြစ်လာစေနိုင်ပါတယ် …။
-ကိုယ့်အပေါ် မေတ္တာရှိလို့မဟုတ်ဘဲ ကိုယ့်စည်းစိမ်ကို မက်လို့လာတဲ့သူတွေ မစဉ်းစားပါနဲ့ ။
ကိုယ့်ငွေတွေကို သူတို့ငွေလို အသုံးချချင်တဲ့ အချိန်ကျမှလာပြီး သူတို့လိုချင်တာရတာနဲ့ ဘယ်သူ့မျက်နှာမှ မကြည့်ဘဲ ပြန်ထွက်သွားမယ့် မိန်းမတွေဖြစ်ပါတယ် ။
-အပျော်အပါးမက်လွန်းတဲ့မိန်းကလေးတွေကတော့ အချစ်ရေးအဆင်ပြေပြေနဲ့ အောင်မြင်အောင် ထိန်းသိမ်းဖို့ထက် သူတို့ပျော်ဖို့ကိုပဲ စိတ်ဝင်စားတဲ့သူတွေဖြစ်တာကြောင့် ရေရှည်လက်တွဲမယ်ဆိုရင် စဉ်းစားသင့်တဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်။
အတွေးလွန်တတ်တဲ့ ချစ်သူတစ်ယောက်ပိုင်ဆိုင်ထားသူတွေ သိထားရမယ့်အချက်များ
သင်ဟာ အတွေးလွန်တတ်တဲ့သူတစ်ယောက်မဟုတ်ဘူး။ ဒါပေမယ့် သင့်ချစ်သူဟာ တစ်ခုခုကို Over Thinking ဖြစ်တဲ့သူတစ်ယောက်ဆိုရင် သင့်အနေနဲ့ ဒီအချက်တွေကို သိထားသင့်ပါတယ်။ တခါတလေ အတွေးလွန်တတ်တဲ့သူတွေကို သင့်အနေနဲ့ နားလည်ရခက်ခဲပါတယ်။ သူတို့တွေဟာ မကြာခဏဆိုသို စိုးရိမ်ပူပန်တတ်ပြီး ကိုယ့်ကိုကိုယ် သံသယရှိတတ်ပါတယ်။ သင်ဟာ အခုလို အတွေးလွန်ချစ်သူတစ်ယောက် ပိုင်ဆိုင်ထားရင် သူနဲ့ အံဝင်ခွင်ကျဖြစ်အောင် သိထားရမယ့်အချက်တွေ၊ သူတို့ကိုပိုမိုကောင်းမွန်တဲ့သူတစ်ယောက်ဖြစ်လာဖို့ ကူညီပေးနိုင်မယ့်အချက်တွေကို မျှဝေပေးချင်ပါတယ်။
သူတစ်ခုခုပြောတော့မယ်ဆိုရင် နားထောင်ပေးလိုက်ပါ။ မဝေဖန်လိုက်ပါနဲ့။သူပြောတာကို သင်နားထောင်ပေးတယ်ဆိုတဲ့ အသိသူ့ကိုပေးပါ။ သူ့ကို နားလည်မှုတွေ ယုံကြည်မှုတွေပေးပါ
အတွေးလွန်တတ်တဲ့သူတွေဟာ ကိစ္စသေးသေးလေးတွေကအစ သူတို့အတွက် အရေးပါပါတယ်။ သူတို့ကို မနက်စာကျွေးတာ၊ ဖိနပ်ကြိုးချည်ပေးတာ၊ အင်္ကျီရွေးပေးတာ၊ သူကြိုက်တတ်တဲ့အစားအစာတွေကို သတိတရ ၀ယ်ပေးတာမျိုးလုပ်ပါ
ကိုယ်နဲ့ သိပ်တိုက်ဆိုင်တဲ့ အရာပါ။ အတွေးလွန်တဲ့သူတွေဟာ တခြားသူတွေထက် ပိုပြီး အကြောင်းအ၇ာကို သိချင်ကြပါတယ်။ ဥပမာ ကိုယ့်အိမ်ကဖုန်းဆက်လာတယ်လို့ မပြောလိုက်နဲ့ ဘာပြောတာလဲ။ အဲဒါပြီးတော့ကော ဘာတဲ့လဲ။ဆိုပြီး မေးတတ်ပါတယ်။ ကိုယ်က အကျဉ်းချုပ်ပဲပြောလိုက်ရင် မကျေနပ်ပြန်ပါဘူး။ ကိုယ်ကလည်း စိတ်မရှည်တာနဲ့ အော်မိပါတယ်။ ဒီလိုမျိုးလုပ်တာထက် သူမေးတာကို စိတ်ရှည်လက်ရှည်နဲ့ဖြေလိုက်ပါ။ မဟုတ်ရင် ဒါလေးမေးတာတောင်မဖြေချင်ဘူး။ ငါ့ကိုဂရုမစိုက်ဘူးလို့ထင်သွားတတ်ပါတယ်
ကိုယ်ကသူ့ကိုချစ်မိပြီပဲ။ သူကအတွေးလွန်သမားပဲဖြစ်နေပါစေ ကိုယ်လက်ခံရမယ်။ နားလည်ပေးနိုင်ရပါမယ်။ သူနဲ့ သဟဇာတဖြစ်အောင်နေနိုင်ရပါမယ်။ ချစ်တယ်ဆိုရင် သူရဲ့ အရှိအတိုင်းလေးကိုပဲ လက်ခံပေးလိုက်ပါ